Soosaarayaasha dhagaxa wanaagsan ee sambabaha iyo Warshadda | Gimarpol
Ma waxaad raadineysaa aaladda ugu habboon dhammaan howlaha qodista gacanta? Dhoolatusyada dhagaxa ee Gimarpol ayaa ah xulashadaada ugu fiican. Waxay bixiyaan nashqad qaabeysan, adeegsiga hawada oo hooseeya waana sahlan tahay in la maareeyo. Astaamahaas awgood, waxaad ku kalsoonaan kartaa waxqabad sare, xoog iyo kharashyo dayactir oo hooseeya. Maxaa intaa ka badan, nidaamka saliidaha ayaa si joogto ah u ilaaliya qaybaha shaqada isla markaana xawaaraha qodista joogtada ahi wuxuu caawiyaa joogtaynta adeeg dheer.
Gimarpol's YT27 / YT28 / YT29A nooca leylinta dhagaxa ee pneumatic ee qodista dhagaxa adag ee jihada ah iyo jihada u janjeera, sidoo kale wuxuu noqon karaa kor u qodida godka barroosinka, daloolku waa Φ 35 ~ 45 mm dhexroor, iyo qoto dheer qodista wax ku oolka ah ee 5 mitir ah.
Waxay kuxirantahay wadada dhinaceeda cabirkeeda iyo xaaladaheeda howlgalka, mashiinka waxaa loo isticmaali karaa lugaha gaaska FT160A, nooca gaaska ee dheeriga ah ee FT160C, lugaha kala daadsan FT160B (miinooyinka birta sidoo kale waa la isticmaali karaa lugta gaaska FT170), sidoo kale waxaa lagu rakibi karaa jumbo ama daloolin hayayaashii si ay u qalalaan oo qodista qoyan.
Magaca halbeegga Cutub Qiimaha halbeegga
Miisaanka kg 27
Dhererka mm 659
Dhexroor dhululubo mm 82
Isticmaalka gaaska L / s ≤65
Qodista iyo soo noqnoqoshada Hz .37
tamarta lmpact J 269
Xawaaraha godka mm / daqiiqo 75475
Dhexroorka ceelka mm 34-42
Daloolin qoto dheer m 5
Aqoon isweydaarsi iyo Xirmo
Hore: Tuubo daloolin taper
Xiga: Ulaha dunta